Foot and Mouth Disease: cudurka Afka iyo Qoobka (CABEEB)
Tuesday April 27, 2010 - 15:25:07 in News & Events by Super Admin
Cudurka Cabeebka waxaa keena oo sabab u ah nafley yar-yar oo aan indhuhu arki karin
qalabka wax weyneeya la’aantiis oo ah kuwa loo yaqaan Fiiruska.
Wuxuu u kala baxaa cudur keenuhu 7 nooc oo kala ah: O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 iyo Asia
1. Noocyada kala duwan ee cudurkan Cabeebka qaarba waxay u yihiin gaar oo ka dhacaan qaaraddaha qaarkood, waana sidatan:
Gobolka Geeska Afrika inta Soomaalidu degto noocyada laga helay waxay yihiin; O, A iyo
Adduun weynaha cudurka Cabeebka waxaa ka nabad galay wadamo tiro yar oo keliya kuwaas oo aan weli lagu arag waxaana ka mid ah; New Zealand, Jabaan iyo wadamada Badhtamaha Qaaradda Koonfurta Ameerika qaarkood. Waxaa cudurkan lagu guuleystay in laga cidhibtiro wadamada ay ka mid yihiin, Australia, Canada (Kanada) iyo Maraykanka.
Wadamada Qaaradda Urub (Europe) badidooda iyana waa laga cidhibtiray, inkastoo dhowaan dhowr jeer Cabeeb ka dilaacay dalka Boqortooyada Ingriiska (U.K.)